किसमिसले रगतको कमि पूरा गर्नुको साथै, छन यति धेरै लाभहरु…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौ : किसमिस एक स्वादिष्ट र व्यापक रूपमा लोकप्रिय विविधता हो। सुख्खा फलमा समावेश किसमिस स्वाद र विभिन्न गुणहरुले भरपूर छ। जब अंगुरलाई विशेष रूपमा सुकाइन्छ, यसलाई किसमिन भनिन्छ। अंगुरको लगभग सबै गुण किसमिसमा पाइन्छ।
यो दुई मुख्य प्रकारको हुन्छ, रातो र कालो। किसमिस पनि सुनौलो रंग वा हरियो रंगमा पनि हुन्छ। किसमिस स्वास्थ्यको लागि निकै लाभकारी हुन्छ। वास्तवमा किसमिस मिठो स्वादको कारण क्यान्डीहरू र चकलेटको लागि उपयुक्त विकल्प हो। किसमिस काँचो नै खान सकिन्छ वा हलुवा पकाउन, खीर पकाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो व्यापक रूपमा डेसर्ट, कुकिज, र स्वादिष्ट पकवानमा प्रयोग गरीन्छ।
किसमिस ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यसले खेलाडीहरू, आरोहीहरू र अन्यहरूको लागि स्वास्थ्य टोनिकको रूपमा काम गर्दछ र उच्च ऊर्जा पूरकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। किसमिसलाई सुख्खा फलको राजा भनिन्छ। किशमिशलाई पोषण र स्वास्थ्य लाभहरूको कारण “हीरा” मानिन्छ।
किशमिश खानेले रगत बढ्छ र यो मुटुको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। किसमिस उर्जा र अन्य आवश्यक पोषक तत्वहरूको समृद्ध स्रोत हो। किसमिसमा ७२ % चिनी हुन्छ, जस मध्ये अधिकांश फ्रुक्टोज र ग्लुकोज हुन्छ। यसमा करीव ३ % प्रोटीन ३.७ %-६.८ % फाइबर समावेश छ। किसमिसमा केही एन्टि क्सिडेन्टहरू पनि हुन्छन् जस्तो कि प्रूनस र खुबानी। यसले ताजा अंगुर भन्दा कम भिटामिन सी समावेश गर्दछ। यसले कुनै पनि कोलेस्ट्रोल समावेश गर्दैन।
कब्जियत र पाचन तन्त्र
कब्जियत, एसिडिटी र थकान जस्ता पेटका समस्याहरूका लागि किसमिस धेरै फाइदाजनक हुन्छ। किसमिस रेचकको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले पेटमा गएर पानी अवशोषित गर्दछ, जसको कारणले यो फुल्छ र कब्जियतबाट आराम दिन्छ। पाचन प्रणाली सम्बन्धि समस्याको लागि पनि यो निकै लाभदायक हुन्छ।
किसमिसमा आइरन प्रचुर मात्रामा समावेश हुन्छ। किसमिसको सेवनले शरीरलाई एनीमियासँग लड्न शक्ति दिन्छ। किसमिसले रगत बनाउन भिटामिन बी कम्प्लेक्सको आवश्यकता पनि पूरा गर्दछ। किशमिशमा अवस्थित कपरले रगतमा रातो रक्त कोषहरू बनाउने काम गर्दछ।
किसमिसमा फेनोलिक पाइथोन्युम्यूट्रियन्टहरू पाइन्छ जसले जीवाणुनाशक, एन्टि बायोटिक र एन्टी-अक्सीडेन्ट तत्व समावेश गर्दछ, जसले ब्याक्टेरिया संक्रमण र भाइरलसँग लडेर छिट्टै ज्वरोलाई निको पार्छ।
किसमिसमा एन्टी-अक्सीडेन्ट गुण हुन्छ जसले आँखाको फ्रि रेडिकल विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ। किसमिसको सेवनले मोतियाबिन्द, आँखाको कमजोरी, मांसपेशीको क्षति आदि हुँदैन। यसले भिटामिन ए, ए-बीटा क्यारोटीन र ए-क्यारोटीनोइड इत्यादि समावेश गर्दछ जुन आँखाको लागि राम्रो हो।
Prevदैनिक रूपमा ओखर खानुको यति धेरै फाइदा…हेर्नुहोस । सेयर गरौ !
Nextमोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ! अपनाउनुस यस्ता उपायहरु ।(भिडियो सहित)